Ny Tenin'Andriamanitra notadidiana
"amin'ny fahoriako [dia] ny teninao no mamelona ahy." Salamo 119:50
"Ny teninao no fifaliako sy firavoravoan'ny foko." Jeremia 15:16
Tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-20, dia nosamborin'ny manam-pahefana i Russel Morse, misionera tany Chine, ary nogadraina efa ho roa taona. Natoka-monina tao anaty efitra bitika izy, tsy navela hifandray tamin'ny tety; ivelany, ka niaina tao, tsy nisy ny Baiboliny na boky hafa. Indroa isanandro ny sakafony no nasisika teo amina hirika eo amin'ny varavarana. Dia toy izany no niainany nandritra izany fotoana izany, tsy nahare na nahita olona, tsy nahafantatra akory aza raha mba misy mahalala ihany hoe mbola velona izy na hoe aiza no misy azy.
Nambarany taty; aoriana fa nety ho tena lasa adala izy raha tsy afaka nahatsiaro andinin-tSoratra Masina nataony tsianjery taloha. Izany no nihazona ny sainy hiasa. Marina fa tsy ho nandao azy Andriamanitra, nefa dia fampaherezana lehibe ho azy ny nanovo hery, tamin'ny fotoana rehetra, tao amin'ny Tenin'Andriamanitra, voatahiry tao an-tsainy.
Isika izay niangarana ka manana Baiboly an-kalalahana, moa ve mba efa nihevitra ny hanjo antsika raha esorina amintsika ny Baiboly, na inona na inona antony? Tena ilaintsika mandrakariva marina tokoa ny miaraka amin'ny Tenin'Andriamanitra. Aoka hohararaotintsika io harena notehirizin'Andriamanitra io. Aoka isika hijery isanandro ny Tenin'Andriamanitra, hamaky azy tsara, am-paharetana sy am-bavaka, fa manan-kery izy hiraikitra ao amin'ny fanahy sy fitadidiantsika, mba hamahana antsika mandrakariva ny amin'i Kristy. Aza misalasala mianatra tsianjery andinin-tSoratra Masina, sy mandika azy ireny ao anaty karine-ntsika manokana.